आफ्नो र समिक्षा अधिकारीको चरित्र हत्या नगरिदिन नायक पल शाहको आग्रह « रिपोर्टर्स नेपाल
आफ्नो र समिक्षा अधिकारीको चरित्र हत्या नगरिदिन नायक पल शाहको आग्रह
प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०७८, सोमबार
काठमाडौं, ८ कार्तिक । चर्चित नायक पल शाहले आफू र गायिका समिक्षा अधिकारीसँग नाम जोडेर समाचार आएपछि आफ्नो तर्फबाट स्पष्टीकरण दिएका छन् । हिजोमात्रै गायिका अधिकारीले पनि आफ्नो तर्फबाट स्पष्टीकरण दिएकी थिईन् । नायक शाहले पनि हिजो राति सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमार्फत आफू र समिक्षाबीच मित्रता र सहकार्य भएको बताएका छन् । तर, तथानाम शीर्ष दिएर सिंगो पत्रकारितालाई पनि बद्नाम गर्ने काम भएको उनको टिप्पणी छ। उनले आफूहरुको चरित्र हत्या हुनेगरि काम नगर्नपनि अनुरोध गरेका छन् ।
पलले यस्तो लेखेका छन्-
देश बिदेशमा रहनुभएका सम्पुर्ण मेरा दर्शक श्रोता ज्युहरुमा हार्दिक सम्मान अनि धेरै माया। बिगत केही दिनदेखी मेरो र गायिका समिक्षा अधिकारीको बिषयमा आइरहेका समाचार बाट म लगायत मेरो परिवार अनि मलाई माया गर्नुहुने सिङ्गो दर्शक दिर्घ नै दुखी बनेको महशुस हामिले गरेका छौ ।
जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्दा पनि केही ब्यक्त्ती समूह कहि न कहि कुनै न कुनै प्रकारले नजिक हुने गर्छ यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। मेरो पेशा र बिधाका कारण म धेरै मान्छेहरु सँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ र म सँग जोडिनु हुने मेरा अग्रज, अनुज र सहकर्मीहरुमाझ मैले सदैब आफुलाई सहज र सहयोगी तवरले प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छु। अरु कलाकारहरु सँग जस्तै र अरुले जस्तै साङ्गितिक सहकार्य गायिका समिक्षा अधिकारीसँग पनि भएको कुरा यहाहरुलाई विदितै छ।
हुँदै नभएका, गर्दै नगरिएका, बिना आधारका कुराहरुलाई गसिप बनाएर एउटा कालाकार र उसको व्यक्त्तिगत जीवन माथी आंच आउने किसिमले लेखिएका झुटा समाचारहरुले मलाई अत्यन्तै दुखि बनाएको छ। यसरी कसैको व्यक्त्तिगत प्रतिष्ठा र चरित्र हत्या हुने गरि बदनाम गर्ने गरि समाचार नबनाई दिनुहुन सम्पुर्ण मिडियाकर्मी ज्युहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
मैले सधै दर्शक श्रोता मेरो घर अनि मिडियालाई आफ्नो परिवार मानेको छु र सदैव मानिरहने छु। यहि घर परिवारको माया, आशीर्वाद र शुभेच्छाको कारणले गर्दा नै म यहासम्म आइपुगेको छु। मैले जानेर नजानेर कसैको चित्त दुखाएको छु भने म यसै पोस्ट मार्फत हार्दिक माफी माग्द्छु।
गायिका समिक्षा अधिकारी र मेरो बिचमा भएको मित्रता र सहकार्यलाई अन्य अन्य तथानम शिर्षक दिएर सिङ्गो पत्रकारिता लाई पनि बदनाम गर्ने र हाम्रो चरित्र हत्या हुने कार्य नगरिदिनुहोला ।
-हजुरहरुको पल शाह !!
गोलाप्रथा लागु भैसक्दापनि सर्वोच्च अदालतमा फेरि भाँडभैलो मच्चाउने षड्यन्त्र, मध्यरातमा न्यायाधीश कार्की किन पुगे कल्याण श्रेष्ठ निवासमा ?
काठमाडौं, १५ मंसिर । सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा पहिलोपटक गोलाप्रथाद्वारा ११ वटा इजलास गठन भएका छन्
एक्शन–ओरिएन्टेड मिनिस्टर प्रेम आलेले छोटो समयमै जनताको मन जिते, आन्तरिक टर्मिनलमा निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन (फोटोफिचर)
काठमाडौं, १५ मंसिर । एक्शन ओरिएन्टेड मिनिस्टरको रुपमा छवि बनाएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री
सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट आज ११ इजलास गठन
काठमाडौं, १५ मंसिर । सर्वोच्च अदालतमा बुधबार गोला प्रथामार्फत पेसी तोकिएको छ । मंसिर १५
आज विश्व एड्स दिवसः ६३ प्रतिशतले घट्यो नेपालमा सङ्क्रमणदर
काठमाण्डौ, मंसिर १५ । आज ३४ औं विश्व एड्स दिवस, नेपालमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी
बालकृष्ण ढुंगेल १६६६ मत ल्याई बने एमाले केन्द्रीय सदस्य
काठमाडौं, १४ मंसिर । नेकपा माओवादीबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका बालकृष्ण ढुंगेल १०औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय
ओलीले लिए एमाले अध्यक्षको सपथ
काठमाडौं, १४ मंसिर । नेकपा एमालेको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीले पदको सपथ लिएका छन् ।
महेश बस्नेतको १७२४ मत
काठमाडौं, १४ मंसिर । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचनमा निर्वाचित महेश बस्नेतले १७ सय २४
बाग्मती प्रदेश सभापतिमा देउवा समूहले ईन्द्र बानियाँलाई अघि सार्यो, अहिले केहीबेरमै उम्मेद्वारी घोषणा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको बाग्मती प्रदेश सभापतिमा पार्टी केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो समूहबाट ईन्द्रबहादुर
प्रदूषित बन्दै मेलम्ची नदि
सिन्धुपाल्चोक, १५ मंसिर । मेलम्ची बाढीपछि मेलम्ची नगरपालिकाले फोहोर नउठाउँदा नदि किनार प्रदूषित बन्दै मेलम्ची